Dutchtown Main Streets ၏ 2021 နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ • DutchtownSTL.org • Dutchtown၊ St. Louis, MO
စီးပွားရေးနှင့် အိမ်နီးနားချင်းများ အတူတကွ ကြီးပွားတိုးတက်သည့်နေရာ။
Dutchtown Main Streets များသည် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် Dutchtown ရပ်ကွက်အတွင်း အခွင့်အလမ်းများကို ဖော်ဆောင်ပေးခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် မျှဝေသာယာဝပြောမှုကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။
နေရာများ၊ နေရာများနှင့် မျက်နှာများကို မြှင့်တင်ပါ။
စိန့်လူးဝစ် ပင်မလမ်းများ ရှေ့ပြေးအစီအစဉ်
2019 ခုနှစ်တွင်၊ Downtown Dutchtown နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ မစ်ဆူရီပင်မလမ်းဆက်သွယ်မှု Missouri ရှိ ပထမဆုံး UrbanMain ခရိုင်ဖြစ်လာရန်။ UrbanMain ပရိုဂရမ်သည် ကျယ်ပြန့်လာပါသည်။ စိန့်လူးဝစ်ပင်မလမ်းများပဏာမခြေလှမ်းLaclede's Landing နှင့် Delmar corridor ကဲ့သို့သော အခြားနယ်ပယ်များနှင့်အတူ အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ပါသည်။
St. Louis Main Streets Initiative သည် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ Main Street ၏ Four Point ချဉ်းကပ်မှုဒီဇိုင်း၊ စီးပွားရေးတက်ကြွမှု၊ မြှင့်တင်ရေးနှင့် အဖွဲ့အစည်းကို အလေးပေးသည်။ Dutchtown Main Streets လေးခုကို သက်ဆိုင်ရာက ဖန်တီးထားပါတယ်။ ကော်မတီများ ဤချဉ်းကပ်မှုဖြင့် အချက်တိုင်းကို အာရုံစိုက်ပါ။
2021 နှစ်ကုန်တွင်၊ Dutchtown Main Streets သည်aပြည့်စုံသော လုပ်ဆောင်ချက် အစီအစဉ် လာမည့်နှစ်များတွင် ကော်မတီများ၏ လုပ်ငန်းများကို လမ်းညွှန်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
Dutchtown ကော်မတီများ မည်သို့ဆောင်ရွက်ခဲ့သနည်း။
ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း Dutchtown ကော်မတီများ Dutchtown Main Streets ၏ မစ်ရှင်နှင့် အလုပ်များကို လမ်းညွှန်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ Dutchtown Main Streets ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှင့် ကော်မတီတစ်ခုစီတွင် ရပ်ရွာပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ပါဝင်သူဖြစ်သည်။ ကော်မတီများတွင် ပါဝင်လိုသည့် အခြားသော ရပ်ရွာလူထုများလည်း ပါဝင်သည်။
Dutchtown ကော်မတီများသည် ရပ်ရွာအသိပေး ဘက်စုံလုပ်ဆောင်မှု အစီအစဉ်ကို ရေးဆွဲရန် ကူညီပေးခဲ့ပါသည်။ အစီအစဥ်သည် ရပ်ရွာ၊ ကော်မတီဝင်များနှင့် ဘုတ်အဖွဲ့တို့မှ ဆက်လက်ထည့်သွင်းပေးထားသည့်အတိုင်း ကော်မတီများ၏ လုပ်ငန်းများကို 2022 ခုနှစ်တွင် လမ်းညွှန်ကူညီပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
အောက်တွင် Dutchtown ကော်မတီများသည် 2021 ခုနှစ်တွင် ပြီးမြောက်ခဲ့သည့်အရာများနှင့် 2022 အတွက် ၎င်းတို့စီစဉ်ထားသောအရာများကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။
Dutchtown Safe Clean & Green Committee သည် Main Street ချဉ်းကပ်မှုလေးရပ်နှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်အတွက် 2021 ခုနှစ်တွင် Dutchtown Design Committee တွင် ပေါင်းစည်းခဲ့သည်။ ဒီဇိုင်းကော်မတီ၏ ထီးရိပ်အောက်တွင်၊ ဆပ်ကော်မတီများသည် အများသူငှာနေရာများကို မြှင့်တင်ခြင်း၊ အလှပြုပြင်ခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဆောင်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ကြပြီး ရပ်ကွက်အတွင်း ဘေးကင်းရေးတိုးတက်စေရန် အခွင့်အလမ်းများကို ရှာဖွေကြသည်။
2021 ခုနှစ်မှ ပေါ်လွင်ချက်များ ပါဝင်သည်-
အဆိုပါ ရပ်ကွက်အတွင်း အလှအပဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်ယင်းနှင့် တွဲဖက်. Dutchtown ရပ်ရွာတိုးတက်မှုခရိုင်, အလုပ်အကိုင်ချိတ်ဆက်မှုနှင့် စိန့်လူးဝစ်လူသားများအတွက် Habitat: အလှပြင်ရေး အဖွဲ့သားများသည် CID ခြေရာကို လှည့်ပတ်ကာ အမှိုက်ပုံးများကို ပုံမှန်အလွတ်နှင့် ခရိုင်တစ်လျှောက် အမှိုက်များကို ဖယ်ရှားရန်။ အဖွဲ့သားများသည် Dutchtown အသိုင်းအဝိုင်းမှ ငှားရမ်းကြပြီး တစ်နာရီလျှင် ၁၅ ဒေါ်လာဖြင့် စတင်သည်။
ရှင်းလင်းရေးပွဲများ အနီးနားတစ်ဝိုက်တွင်- ကျွန်ုပ်တို့၏ အအောင်မြင်ဆုံး သန့်ရှင်းရေးများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုသန့်ရှင်းစွာထားပါ 2021 ခုနှစ်၏ဆောင်းဦးရာသီတွင်, နှင့်အတူပူးပေါင်း ဆလပ် (စိန့်လူးဝစ်အသင်းအဖွဲ့များအသင်း) နှင့် စိန့်လူးဝစ်ဧရိယာတစ်ဝှမ်းမှ ဘောလုံးအားမြှင့်တင်သူများအဖွဲ့သည် ဒတ်ချ်တောင်းတွင် အားကစားကို မြှင့်တင်ရန် ကတိပြုပါသည်။ ဒီဇိုင်းကော်မတီနဲ့လည်း ပူးပေါင်းထားပါတယ်။ EarthDay365 ဆိုးရွားလှသော ရာသီဥတုကြောင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဒါဇင်ပေါင်းများစွာကို သန့်ရှင်းရေးအတွက် ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။
Dutchtown CID ရှိ Curated Camera Network ရှေ့ပြေးပရိုဂရမ်- CID သည် မှုခင်းဖြစ်ပွားမှုကို ဟန့်တားရန်နှင့် အခင်းဖြစ်ပွားပါက ဗီဒီယိုအထောက်အထားများနှင့် ယာဉ်ဒေတာများ ပေးဆောင်ရန် ခရိုင်ခြေရာရှိ အမှတ်အများအပြားတွင် လိုင်စင်နံပါတ်ဖတ်သူများပါရှိသော Flock ကင်မရာများကို တပ်ဆင်ထားသည်။
စည်းရုံးရေး ပိတ်ဆို့ဒီဇိုင်းကော်မတီသည် ရပ်ကွက်ပါတီများ စည်းရုံးခြင်း၊ တွေ့ဆုံခြင်းနှင့် အချင်းချင်း သိကျွမ်းရန် အခွင့်အလမ်းများ ပေးခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ရက်များ ထူထောင်ခြင်းဖြင့် အနီးနားတစ်ဝိုက်ရှိ တုံးများပေါ်တွင် အိမ်နီးချင်းများကို စုစည်းရန် ဒီဇိုင်းကော်မတီက လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
2022 တွင်၊ ဒီဇိုင်းကော်မတီသည် Dutchtown ၏ ခံယူချက်နှင့် အဖြစ်မှန်များကို တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန် အခွင့်အလမ်းများကို ဆက်လက်ရှာဖွေသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤကြိုးပမ်းမှုများတွင် ဆက်လက်ရှင်းလင်းရေး ကြိုးပမ်းမှုများ၊ အများသူငှာ အနုပညာပရောဂျက်များ၊ ရပ်ကွက်အတွင်း ဦးတည်ရာနေရာတံဆိပ်တပ်ခြင်းနှင့် နည်းလမ်းရှာဖွေခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွဲ့စည်းထားသော ဘလောက်များကွန်ရက်သို့ အိမ်နီးချင်းအသစ်များ ထည့်သွင်းခြင်းနှင့် အများသူငှာ နေရာများတွင် လှုပ်ရှားမှုကို မြှင့်တင်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ ထို့အပြင်၊ ကနဦးတပ်ဆင်မှုများ၏ရလဒ်များအပေါ်အခြေခံ၍ Curated Camera Network ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် 2022 ခုနှစ်တွင် Dutchtown CID ၏အဓိကစင်္ကြံများသို့ ကင်မရာများပိုမိုရောက်ရှိလာနိုင်သည်။ ဒီဇိုင်းကော်မတီနှင့်လည်း နီးနီးကပ်ကပ် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ Gravois-Jefferson အစီအစဉ် သာတူညီမျှစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အားပေးသည့် အထူးအသုံးပြုခရိုင်တစ်ခု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ဒီဇိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်ရေးကော်မတီ။
ပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌများ- Joel Silliman နှင့် Amanda Fair
Dutchtown ဒီဇိုင်းကော်မတီကို ဆက်သွယ်ပါ။ design@dutchtownstl.org
Dutchtown Economic Vitality Committee သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ဆွဲဆောင်ရန်နှင့် Dutchtown စီးပွားရေးအသိုင်းအဝိုင်းကို အားကောင်းစေခြင်းအပေါ် အာရုံစိုက်သည်။ ကော်မတီသည် လက်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုများကို စစ်တမ်းကောက်ယူပြီး အလားအလာရှိသော အခွင့်အလမ်းများဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို စုဆောင်းလျက်ရှိသည်။
Dutchtown သည် 2021 ခုနှစ်တွင် Dutchtown ၏တတိယသုံးလပတ်တွင် Dutchtown တစ်ခုတည်းတွင်အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကတိုးတက်မှုများတွင်ဒေါ်လာ 500,000 ကျော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်ဟု Economic Vitality Committee မှအစီရင်ခံသည်။ ထို့အပြင် လုပ်ငန်းသစ် ၁၃ ခု ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး အချိန်ပြည့် အလုပ်အကိုင်သစ် ၂၄ ခု ဖန်တီးပေးခဲ့သည်။
2022 ၏အစီအမံများတွင် ဒေတာမြေပုံဆွဲခြင်းဖြင့် ရပ်ကွက်အတွင်း စီးပွားဖြစ်လစ်လပ်နေရာများကို အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်း၊ လစ်လပ်သောစီးပွားရေးဆိုင်ရာနေရာများတွင် အခွင့်အလမ်းများကို စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့် သိသာထင်ရှားသော အထင်ကရစီးပွားရေးအိမ်ရာများတွင် ပစ်မှတ်ထားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ရှာဖွေခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ကော်မတီသည် လက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို အားကောင်းလာစေရန်နှင့် လုပ်ငန်းစတင်လည်ပတ်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းစတင်ရန် အထောက်အကူဖြစ်စေရန်အတွက် ပညာရေး၊ ငွေကြေးနှင့် အခြားပံ့ပိုးမှုအရင်းအမြစ်များကို ပိုမိုစုဆောင်းသွားရန်လည်း စီစဉ်ထားပါသည်။
ပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌများ- Jarred Irby နှင့် Nate Lindsey
Dutchtown Economic Vitality Committee သို့ ဆက်သွယ်ပါ။ ev@dutchtownstl.org
2021 သည် Dutchtown Promotion Committee မှ စီစဉ်ကျင်းပသော ပွဲတော်အမျိုးမျိုးဖြင့် ထူးထူးခြားခြားနှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်သည်။
2021 ခုနှစ်မှ အချို့သောအချက်များ-
Dutchtown နွေရာသီ Vibes− ဇွန်လတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် တိုက်ရိုက်ဂီတ၊ အစားအသောက်နှင့် သောက်စရာများ၊ ဒေသခံဈေးသည်များနှင့် အခြားများစွာပါဝင်သည့် နွေရာသီလမ်းပေါ်ပွဲတော်တစ်ခုအတွက် အနီးနားနှင့် အနီးနားရှိ Dutchtown သို့ လူရာပေါင်းများစွာကို ကြိုဆိုခဲ့ပါသည်။
Dutchtown ရုပ်ရှင်ည− Marquette Park ရှိ နွေရာသီရုပ်ရှင်ညများသည် တတိယနှစ်တွင် မိသားစုနှင့်လိုက်ဖက်သောဖျော်ဖြေရေးများအတွက် အနီးနားတစ်ဝိုက်မှ မိသားစုများကို ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ Marquette Park Pool တွင် ငုပ်လျှိုးနေသော ရုပ်ရှင်ဖြင့် ရာသီပိတ်ပါသည်။
2021 ခုနှစ် နွေရာသီတွင် Dutchtown Main Streets များကို ပြန်လည်နာမည်ပြောင်းခြင်းနှင့် ပြန်လည်စတင်ခြင်း- ကျွန်ုပ်တို့သည် ကော့တေးပါတီနှင့် ရန်ပုံငွေပွဲတစ်ခုဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အမည်သစ်နှင့် ဦးတည်ချက်အသစ်ကို ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အိမ်နီးချင်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုစင်တာ. နာမည်နှင့် အမှတ်တံဆိပ်အသစ်သည် အဖွဲ့အစည်း၏ ရည်မှန်းချက်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ထင်ဟပ်စေပြီး Dutchtown အတွက် ဦးတည်ရာအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် ကြိုးပမ်းမှုများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
နှုတ်ကပတ်တော်ဖြန့်ခြင်း- ကျွန်ုပ်တို့သည် DutchtownSTL.org ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် လူမှုမီဒီယာချန်နယ်များမှတစ်ဆင့် ဒတ်ခ်ျတောင်းရပ်ကွက်ကို ဆက်လက်မြှင့်တင်ခဲ့ပြီး ရပ်ရွာဖြစ်ပျက်မှုများဆိုင်ရာ အပ်ဒိတ်များကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ အရင်းအမြစ်များကို အိမ်နီးချင်းများနှင့် မျှဝေပါ။နှင့် နှုတ်ကပတ်တရားတော်ပြန့်ပွား Dutchtown မှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ကြီးကျယ်တဲ့ အရာတွေအကြောင်း (မင်း ငါတို့ကို လိုက်ကြည့်နေတာ သေချာပါစေ။ Facebook က, တွစ်တာနှင့် Instagram ကို!)
လာမည့်နှစ်တွင်၊ မြှင့်တင်ရေးကော်မတီသည် ဒုတိယနှစ်ပတ်လည် Dutchtown Summer Vibes ပွဲတော်၊ ရုပ်ရှင်ညများ နှင့် အိမ်နီးချင်းများ အချင်းချင်း ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး Dutchtown ဆင်နွှဲရန် အခမ်းအနားအသစ်များကဲ့သို့သော လူထုတည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာပွဲများကို လာမည့်နှစ်တွင် ပိုမိုကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ မတ်လမှာ ကော်မတီက နောက်တစ်ခု ထပ်လုပ်ဖို့ စီစဉ်နေတယ်။ ဒတ်ခ်ျသွားပါ အိမ်ခြံမြေပွဲ ပထမအကြိမ် အိမ်ဝယ်သူများကို ရပ်ကွက်နှင့် မိတ်ဆက်ပေးပြီး အိမ်ပိုင်ရှင်အဖြစ် လက်တွေ့ဖြစ်လာစေရန် အရင်းအမြစ်များကို မျှဝေပေးမည်ဖြစ်သည်။ ကော်မတီသည် ဒေသတွင်း အိမ်နီးချင်းများနှင့် ဧည့်သည်များထံမှ စိတ်ဝင်စားမှုနှင့် ထိတွေ့မှုအသစ်များကို ဆွဲဆောင်ရန်အတွက် Dutchtown ရပ်ကွက်အတွင်း အမှတ်တံဆိပ်နှင့် ဂုဏ်သတင်းကို ဆက်လက်ဖော်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ပူးတွဲဥက္ကဌများ- Nick Findley နှင့် Adina O'Neal
Dutchtown Promotion Committee ကို ဆက်သွယ်ပါ။ promotion@dutchtownstl.org
Dutchtown Organization Committee သည် အခြားသော ကော်မတီများ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို ချိန်ညှိရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ ရည်မှန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်စေရန် သေချာစေရန် လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ကော်မတီ၏ ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေး ကြိုးပမ်းမှုများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ အလှူငွေ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းအတွက် ယခင်က မမြင်ရသောအဆင့်များသို့ ပံ့ပိုးကူညီမှုများ။ ထို့အပြင်၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအသစ်များနှင့် ကော်မတီဝင်များသည် ရပ်ကွက်တိုးတက်ရေးအတွက် နာရီရာနှင့်ချီ၍ အပ်နှံခဲ့ကြသည်။
2022 ခုနှစ်တွင်၊ အဖွဲ့အစည်းကော်မတီသည် အပိုအလှူရှင်များ၊ ပံ့ပိုးကူညီမှုများနှင့် ထောက်ပံ့ကြေးများမှတစ်ဆင့် ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်အသစ်များရှာဖွေရန် ၎င်း၏စွမ်းရည်ကို တိုးချဲ့ရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ကော်မတီသည် စေတနာ့ဝန်ထမ်း အခြေစိုက်စခန်းကို ဆက်လက်တိုးချဲ့ပြီး ကျွန်ုပ်တို့တွင် ပါဝင်ရန် အိမ်နီးချင်းများကို ထပ်မံဖိတ်ခေါ်ပါမည်။ ရပ်ရွာမှမောင်းနှင်သော ဒတ်ခ်ျမြို့ကော်မတီများ.
တွဲဖက်ဥက္ကဌများ- Lyndsay Baruch နှင့် Paula Gaertner
organization@dutchtownstl.org တွင် Dutchtown အဖွဲ့ကော်မတီကို ဆက်သွယ်ပါ။
နောက်ထပ် 2021 အထူးအသားပေးများ
စေတနာအလှူရှင်များ၏ တိုက်တွန်းမှုကြောင့် (ကျေးဇူး၊ ခရော -Butz အာမခံ!) Meramec Street တွင် ပထမဆုံး လက်ခံကျင်းပခဲ့သည်။ Dutchtown နွေရာသီ Vibes 2021 ခုနှစ် ဇွန်လအစောပိုင်းတွင် ပွဲတော်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါပွဲသည် တိုက်ရိုက်ဂီတ၊ ရပ်ကွက်စျေးဝယ်၊ အစားအသောက်၊ ပေါ့ပ်အပ်ရောင်းချသူများ၊ အလုပ်ရှင်များနှင့် Downtown Dutchtown ရပ်ကွက်သို့ ယူဆောင်လာပါသည်။ အပူရှိန်ပြင်းနေသော်လည်း Dutchtown နှင့် အခြားနိုင်ငံမှ ရာနှင့်ချီသော အိမ်နီးချင်းများသည် ဆင်နွှဲရန် ထွက်လာကြသည်။
Marquette Park နှင့် ပိုမိုလုပ်ဆောင်ပါ။
2020 ခုနှစ် နွေရာသီတွင် ပိတ်သိမ်းပြီးနောက် Marquette Park Pool သည် 2021 ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ အောင်မြင်သော ရေကူးကန်အသုံးပြုသူများအတွက် ပရိဘောဂအသစ်များကို ထုတ်ဖော်ပြသရန် စိတ်လှုပ်ရှားနေပါသည်။ 2019 ခုနှစ် ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေး ကြိုးပမ်းမှု South Side ၏ တစ်ခုတည်းသော အခမဲ့ပြင်ပရေကူးကန်သို့ သာယာအဆင်ပြေမှုအသစ်နှင့် အရောင်အဆန်းများ ယူဆောင်လာရန် $7,000 စုဆောင်းခဲ့သည်။
စိန့်လူးဝစ် CITY SC Major League Soccer အသင်းသစ်နှင့် စိန့်လူးဝစ်ပန်းခြံဌာနနှင့် ပုဂ္ဂလိက အလှူရှင်များစွာတို့နှင့်အတူ Marquette Park သည် ယခုအခါတွင် အဆိုပါအိမ်ရှိရာ၊ စိန့်လူးဝစ်ရှိ ပထမဆုံး ပြင်ပဖူဆယ်ကွင်း. ဖူဆယ်သည် အနိမ့်ပိုင်းဘောလုံးဂိမ်းဖြစ်ပြီး၊ အုပ်စုငယ်များနှင့် ကစားသမားသစ်များအတွက် ပိုမိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ပြည်တွင်းအပျော်တမ်းများနှင့် ကာလရှည်ကြာ ဘောလုံးဝါသနာရှင်များသည် ဤစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်၊ လျင်မြန်သော၊ ပေါ်လာမည့်ဂိမ်းတွင် ၎င်းတို့၏စွမ်းရည်များကို ကျွမ်းကျင်ရန် တရားရုံးသို့ ပုံမှန်လာရောက်ကြသည်။ တရားရုံးသည် လှပသော ဒတ်ချ်တောင်း-မှုတ်သွင်းထားသော ပန်းချီကားကို ဒေသခံအနုပညာရှင်မှ ရေးဆွဲထားသည်။ Jayvn Solomon နှင့် Dutchtown ရပ်ကွက်အတွင်း တံဆိပ်တပ်ခြင်း အားကစား စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးထားသော ပန်းတိုင်များ။
တတိယနှစ်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အိမ်နီးနားချင်းများကို Marquette Park တွင် ကြိုဆိုခဲ့သည်။ မိသားစုလိုက် နွေရာသီဖျော်ဖြေရေး ကျွန်ုပ်တို့၏ 22 ပေကြီးမားသောမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဇွန်လတွင် ပြသခြင်း။ Jurassic Park က Dutchtown Summer Vibes ပွဲတော်ပြီးနောက် ယနေ့အထိ ကျွန်ုပ်တို့၏ လူကြိုက်အများဆုံး Movie Night ဖြစ်သည်။ ဩဂုတ်လတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေငုပ်ဝင်ရောက်ပြသရန်အတွက် Marquette Park Pool တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ခိုခို ရေကူးကန်၏ 2021 ပိတ်သည့်နေ့တွင် ပျော်ရွှင်ရန် နေရာအနှံ့မှ အိမ်နီးချင်းများကို ခေါ်ဆောင်လာခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှာ Marquette အဝန်းနေ့ ထူးထူးခြားခြား ကျင်းပခဲ့သည်။ ကျောင်းပြန်တက်ပွဲ 2021 ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် Marquette Park တွင် MCD သည် ကလေးရာနှင့်ချီသော ကျောပိုးအိတ်များနှင့် ကျောင်းသုံးပစ္စည်းများ၊ အဝတ်အစား၊ ဆံပင်ညှပ်ခြင်းနှင့် အခြားအရာများကို ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ အခမ်းအနားတွင် ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၏ ကျယ်ပြန့်သောအခင်းအကျင်းများမှ အစားအသောက်၊ ဖျော်ဖြေရေး၊ ရောင်းချသူများနှင့် အရင်းအမြစ်များကို ပြသထားသည်။
Dutchtown မှ လုပ်ငန်းသစ်များကို ကြိုဆိုပါသည်။
2021 ခုနှစ်တွင် Dutchtown မှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသစ်များစွာကို ကြိုဆိုရန် စိတ်လှုပ်ရှားနေပါသည်။ Boutique ကိုမမေ့ပါနှင့် ခေတ်မီအမျိုးသမီးအဝတ်အစားများ၊ လက်ဝတ်ရတနာများ၊ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများနှင့် ခန္ဓာကိုယ်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များကို Virginia Avenue သို့ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပေးပါသည်။ နောက်တံခါး၊ Creative Expressions စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းများ လက်ဆောင်များနှင့် စိတ်ကြိုက်အ၀တ်အထည်များကို ပေးဆောင်သည်။
နောက်ထပ် ဗာဂျီးနီးယား၊ မင်းရဲ့ညစာစားပွဲ ယခင် Iron Barley နေရာဟောင်းတွင် ဖွင့်လှစ်ထားပြီး ထူးထူးခြားခြား စိတ်ဝိညာဉ်အစာ၊ ဘားအပြည့်နှင့် ကြိုဆိုသည့်လေထုကို ပေးဆောင်ထားသည်။ ဒါ့အပြင် ဗာဂျီးနီးယား၊ Times Tattoo ၏ သင်္ကေတ ယခင်ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်ကို စိန့်လူးဝစ်၏ အရည်အချင်းအရှိဆုံး တက်တူးအနုပညာရှင်အချို့ကို လက်ခံကျင်းပသည့် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသော ဆိုင်အသစ်တစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
အဆိုပါ မြို့ပြအိမ်နီးချင်းစားနပ်ရိက္ခာခန်းမစားသည် ကုန်သည်အသစ် သုံးဦးဖြင့် ၎င်းတို့၏ ရွေးချယ်မှုကို ချဲ့ထွင်ခဲ့သည်—Sugoi ဆူရှီ, အားလုံးလိပ်ပြီးပါပြီနှင့် Crepes နှင့် Treats. Dutchtown သို့ အရသာမျိုးစုံရှိသော အရသာမျိုးစုံကို ယူဆောင်လာသောကြောင့် သုံးဦးစလုံးသည် နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသော သုံးသပ်ချက်များကို ရရှိခဲ့ကြသည်။ Meramec ကိုဖြတ်ပြီး၊ မျက်တောင်ခတ်သည် ဒေသဆိုင်ရာ ကုန်သည်များနှင့် အနုပညာရှင်များအား ၎င်းတို့၏ ကုန်ပစ္စည်းများ ရောင်းချရန် ကြိုဆိုသည့် နေရာတစ်ခု ပေးဆောင်ပေးသည့် မျှသုံးနေရာ လက်လီ ဆိုင်ခွဲတစ်ခုအဖြစ် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
စေတနာ့ဝန်ထမ်း- Dutchtown Main Streets ၏ ကျောရိုး
လက်ရှိတွင် Dutchtown Main Streets သည် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ 2021 မှာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေဟာ ရပ်ကွက်အတွက် နာရီရာနဲ့ချီပြီး အလုပ်တွေ လုပ်ခဲ့ကြတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့အပါအဝင် ကျွန်ုပ်တို့၏ စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့စာရင်းရေးသွင်းခြင်း၊ ရန်ပုံငွေရှာဖွေခြင်းနှင့် စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်း၏ နောက်ကျောရုံးလုပ်ငန်းဆောင်တာများမှအစ၊ ရပ်ကွက်သန့်ရှင်းရေးနှင့် ပွဲများအတွက် ပစ္စည်းများသယ်ယူရာတွင် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေသော အလုပ်သမားများအထိ အားလုံးကို အမှန်တကယ်လုပ်ပါ။ အိမ်နီးနားချင်း 50 ကျော်သည် 2021 ခုနှစ်တွင် Dutchtown ရပ်ကွက်သို့ ၎င်းတို့၏အချိန်၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် လုပ်အားကို ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပြီး ထိုအတွက်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ ပို၍တန်ဖိုးထား၍မရပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အကူအညီကို အမြဲပို၍သုံးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထဲမှ တစ်ခုကို ချိတ်ဆက်ရန် စဉ်းစားပါ။ Dutchtown ကော်မတီများ သင့်စိတ်ဝင်စားမှုနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများကို ရပ်ကွက်၏လိုအပ်ချက်များနှင့် မည်သို့တွဲလုပ်နိုင်သည်ကို လေ့လာရန်။ ဒါမှမဟုတ် စောင့်ကြည့်နေပါ။ cleanup ဖြစ်ရပ်များ အခြားစေတနာ့ဝန်ထမ်းအခွင့်အလမ်းများ။
အဆိုပါ ရောဂါပျောက်ကင်းအကြမ်းဖက်မှု 2020 ခုနှစ် နှောင်းပိုင်းတွင် ဒတ်ခ်ျတောင်းတွင် စတင်ခဲ့သည့် အစီအစဉ်သည် ရပ်ကွက်အတွင်း သိသိသာသာ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ပြသခဲ့သည်။ Cure Violence သည် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ကပ်ရောဂါအဖြစ် သေနတ်ဖြင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ချဉ်းကပ်ပြီး ရာဇဝတ်မှု၏ မူလဇစ်မြစ်ကို ဖြေရှင်းရန်နှင့် အကြမ်းဖက်မှု သံသရာကို ချိုးဖျက်ရန် ရည်ရွယ်သည်။
လေ့ကျင့်သင်ကြားထားသော အကြမ်းဖက်မှုကြားဖြတ်သူများသည် မရေမတွက်နိုင်သောအငြင်းပွားမှုများကို စေ့စပ်ညှိနှိုင်းပေးကြပြီး သေနတ်ဖြင့်အကြမ်းဖက်မှုနှင့် လက်တုံ့ပြန်သည့်အခြေအနေများအထိ ကြီးထွားလာပါသည်။ Cure Violence Team သည် ပါတီများအား အလုပ်များရရှိရန်၊ စိတ်ကျန်းမာရေးအကဲဖြတ်မှုများနှင့် ကုသမှုများရယူရန် ကူညီပေးရန်နှင့် အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများမှ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအား လမ်းကြောင်းလွှဲရန်အတွက် အခြားလူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် ကုသပေးသော အကြမ်းဖက်မှုအဖွဲ့သည် အဆိုပါဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများထက် ကျော်လွန်သွားပါသည်။
ဒါပေမယ့် Cure Violence Team က အဲ့ဒီမှာ မရပ်ပါဘူး။ ၎င်းတို့သည် အနီးနားရှိ ပွဲလမ်းသဘင်များတွင် အဆက်မပြတ်ရောက်ရှိနေကြပြီး သန့်ရှင်းရေးများလုပ်ဆောင်ရာတွင် ကူညီရန်၊ ရပ်ရွာအဖွဲ့ဝင်များကိုပါ ပါဝင်စေကာ လူတိုင်းအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော Dutchtown တည်ဆောက်ရန် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိသည်။ အလုပ်အကိုင်ချိတ်ဆက်မှု Dutchtown ရှိ Cure Violence ပရိုဂရမ်ကို စီမံခန့်ခွဲပြီး ၎င်းတို့သည် ပွဲများနှင့် အစီအစဉ်အမျိုးမျိုးတို့တွင် စိတ်အားထက်သန်သော ပါတနာနှင့် စပွန်ဆာအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှာ Dutchtown တောင်အဝန်းကော်ပိုရေးရှင်း အကောင်ထည်ဖော်ရန် ခက်ခက်ခဲခဲ ကြိုးစားခဲ့ကြပါသည်။ Gravois-Jefferson သမိုင်းဝင်အိမ်နီးချင်းစီမံကိန်း. စိန့်လူးဝစ်မြို့သည် အဆိုပါအစီအစဉ်ကို လက်ခံခဲ့ပြီး၊ Dutchtown Main Streets သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အလုပ်အတွက် လမ်းညွှန်တစ်ခုအဖြစ် အစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုရန် DSCC နှင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
အံ့ဖွယ်သတင်းအချို့နှင့်အတူ 2021 ပိတ်သည်- ပြည်တွင်းအကျိုးအမြတ်မယူသော အိမ်ရာဖော်ဆောင်သူ လူသာရင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ ၎င်းတို့ကို စတင်ရန် ရန်ပုံငွေ လုံခြုံစေပါသည်။ Marquette Homes ပရောဂျက်. ပရောဂျက်သည် Dutchtown နှင့် Gravois Park သို့ တတ်နိုင်သော တိုက်ခန်းအသစ် 60 ကို ယူဆောင်လာမည်ဖြစ်သည်။ Marquette Homes သည် Dutchtown မြို့လယ်ခေါင်ရှိ 3305 Meramec လမ်းတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ စွန့်ပစ်ထားသော အဆောက်အအုံ အပါအဝင် ဆိုးရွားစွာ ပျက်စီးယိုယွင်းနေသော အိမ်ရာများကို အသစ်ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း နှစ်ခုစလုံး ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
Lutheran Development Group သည် ယခင်က ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ Chippewa Park ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးDutchtown နှင့် Gravois Park ရှိ အဆောက်အဦ 15 ခုကို ပြန်လည်ပြုပြင်သည့် နောက်ထပ် ကြီးမားသော၊ ပြန့်ကျဲနေသော နေရာစီမံကိန်း။ ၎င်းတို့သည် ရပ်ကွက်ပွဲများစွာအတွက် စေတနာထားပြီး ပံ့ပိုးကူညီသူလည်းဖြစ်သည်။
Dutchtown ကို အသွင်ပြောင်းသည့် အခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ စိန့်ဂျိုးဇက်အိမ်ရာစီမံကိန်း. SJHI သည် ရပ်ကွက်၏တောင်ဘက်စွန်းတစ်လျှောက်တွင် အဓိကပြန်လည်ထူထောင်ရေးပရောဂျက်များကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး၊ ထို့နောက်တွင် ဝင်ငွေနည်းသောနှင့် အလယ်အလတ်ရှိသောမိသားစုများကို နေအိမ်များဝယ်ယူကာ ငွေကြေးလုံခြုံမှုနှင့် လွတ်လပ်မှုရရှိစေရန် ကူညီပေးခဲ့သည်။ St. Joseph Housing Initiative သည် အိမ်နီးနားချင်းအသစ်များနှင့် လက်တွဲပြီး ၎င်းတို့အား အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ထိတွေ့စေပြီး ပိုမိုခိုင်မာသော ရပ်ကွက်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ရာတွင် ကူညီခြင်းဖြင့် အိမ်ဝယ်သူများကို ကူညီပေးခြင်းထက် ကျော်လွန်ပါသည်။ SJHI ဖောက်သည်များပင် စတင်သုံးစွဲလာကြသည်။ လုပ်ကွက်များကို စုစည်းပါ။ သူတို့ရဲ့အိမ်သစ်ပတ်လည်။
လက်ရှိ အလှူရှင်အသစ်များနှင့် လိုက်ဖက်ညီသော ရက်ရောစွာ လှူဒါန်းမှုနှင့်အတူ လှူဒါန်းမှုများနှင့်အတူ 2021 ခုနှစ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အလွန်အောင်မြင်သော Give STL Day ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ ခရော -Butz အာမခံ. မေလတစ်ရက်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အထင်ကြီးလောက်စရာ ဒေါ်လာ ၁၀,၀၀၀ ကို ရရှိခဲ့သည်။
ယမန်နှစ်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ ရရှိရန် ကြီးမားသော ရည်မှန်းချက်ကို ချမှတ်ခဲ့သည်။ ထပ်ခါတလဲလဲ လှူဒါန်းမှုတွေ ဆက်လုပ်နေပါတယ်။. အဲဒီပန်းတိုင်ကို ရောက်အောင်မသွားနိုင်ပေမယ့် ပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့ အခွင့်အလမ်းတွေ အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ သင်၏အကူအညီဖြင့်။ တစ်ဦးက လစဉ်အလှူငွေထောက်ပံ့ မည်သည့်ပမာဏမဆို Dutchtown Main Streets သည် Dutchtown ရှိ အခြေခံလူတန်းစားလူထုဦးဆောင်သည့်လုပ်ငန်းကို ဆက်လက်အာရုံစိုက်နိုင်စေရန် သေချာစေပါသည်။
သင်၏တည်မြဲလှူဒါန်းမှုကို တည်ထောင်နိုင်သည် သို့မဟုတ် တစ်ကြိမ်တည်း အလှူငွေထည့်ဝင်နိုင်သည်။ dutchtownstl.org/donate.
အလှူငွေတွေက ရိုးသားတယ်။ဒါပေမယ့် အဲဒါက ကူညီဖို့ တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ Dutchtown Main Streets များသည် လူတိုင်းအတွက် တက်ကြွပြီး တက်ကြွသော Dutchtown ရပ်ကွက်ကို တည်ဆောက်ရာတွင် ကူညီရန်အတွက် တက်ကြွပြီး တက်ကြွသော အိမ်နီးချင်းများနှင့် ရပ်ရွာမိတ်ဖက်များ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကို အားကိုးပါသည်။
စေတနာ့ဝန်ထမ်းအသစ်များနှင့် အမြင်သစ်များ အမြဲလိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ဦးနှင့်ပူးပေါင်းပါ။ Dutchtown ကော်မတီများ— ဒီဇိုင်း၊ စီးပွားရေးတက်ကြွမှု၊ မြှင့်တင်ရေးနှင့် အဖွဲ့အစည်း—ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်ကို အစီအစဉ်ဆွဲကာ ကျွန်ုပ်တို့၏အသိုင်းအဝိုင်းကို ပြောင်းလဲစေမည့် အခြေခံလူတန်းစားလုပ်ငန်းများကို ကူညီဆောင်ရွက်ရန်။ ပိုမိုလေ့လာသင်ယူပြီးဤနေရာတွင်စာရင်းသွင်းပါ, ဒါမှမဟုတ်အီးမေးလ်က info@dutchtownstl.org သင့်အတွက် မှန်ကန်သော စေတနာ့ဝန်ထမ်း အခွင့်အလမ်းများကို ရှာဖွေရာတွင် အကူအညီရယူပါ။
ဒါမှမဟုတ် ထွက်လာပြီး မင်းရဲ့ထောက်ခံမှုကို ပြသလိုက်ပါ။ သင့်အိမ်နီးနားချင်းများနှင့်တွေ့ဆုံပါ၊ ပျော်ရွှင်စွာကစားပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအဖြစ်အပျက်များမှတစ်ဆင့် Dutchtown မှကမ်းလှမ်းသမျှကိုကြည့်ရှုပါ။ ဘာတွေဖြစ်နေလဲ သင်အမြဲရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ Dutchtownstl.org/calendar.
ဒိန်းမတ် Dutchtown ပင်မလမ်းများ Dutchtown Main Streets ၏ 2021 နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ